Henna Mehndi tattoo marika hevitra ho an'ny bridal - Tattoos Art Ideas
Henna Mehndi tattoo mamorona hevitra ho an'ny bridal
sonitattoo Desambra 17, 2016
Henna tattoo midika
Ny tato henna dia midika zavatra manan-danja amin'ny mpitaiza. Fanamboarana tranainy teo amin'ny vatany izay manana dikany maro. Ampiasaina hanehoana fifaliana sy fahasambarana izy io ary afaka maneho koa ny ady, ny fahaterahana, ny fitahiana ary ny fanambadiana. Ny tattoo #henna dia ampiasaina hiresahana ny mombamomba azy sy ny fahalalany. Ny fampiasana ny henna dia zavatra izay hanome anao izany fifandraisana ara-panahy izany ary manana ireo fahatsapana mampalahelo izay ampiharina amin'izany.
Ny ampahany tsirairay amin'ny vatana izay napetraka ny henna dia ny dikany sy ny heviny manokana. Azo apetraka eo amin'ny palma mitaiza izy mba hiresaka momba ny fitahiana ary rehefa eo am-pelatanany izy io, miresaka momba ny fiarovana ary koa ampiana ny ampinga.
Ny tato henna dia iray #tattoo izay ampiasain'ny olona mba hijery tsara satria noho ny dikan'ny mpizara. Misy zavatra azo ampidinina amin'izy ireo mba hampahalaza azy ireo amin'ny heviny manokana na tantara. Ny henna dia fahefana ao amin'ny #design sy ny dikany. Afaka miala ny vahoaka ianao rehefa mampiasa ny tattoo henna mba hahatonga io fanambarana feno fahasahiana io fa efa te-hiteny izao tontolo izao ianao ary tsy afaka nanao izany ianao.
1. Ny modelin'i Raja Rani
Ity lamina ity dia matetika ampiasaina satria #bridal mehendi dia maro ny fampakaram-bady. Ny endrika dia maneho ny sary sokitra raja ary rani dia manondro ny fanjakan'i Mughal. Sary samihafa no natao manodidina mba hampifantohana ny tarehin'ny mpanjaka sy ny mpanjakavavy
Tsy toy ny hevitra mehendi nentim-paharazana ity iray ity dia hafa kely. Amin'ny ankapobeny dia misy mpivady valentina roa amin'ny palma roa samy hafa tahaka an'i Romeo Juliet.
3. Ny endrika Rajasthani
Mehendi tanteraka tanteraka raha manatrika ny fampakaram-bady ny mpanjaka ianao. Ny endriny dia mety ho bridal iray lavorary raha toa ka foto-kevitra fampakaram-bady mpanjaka izany.
4. Ny mofomamy Bride Groom
Tena tian'ny maro kokoa io pikantsarin'ny Punjabis io. Mifidy azy ireo amin'ny fomba manokana ho an'ny vadin'izy ireo izy ireo. Ny endrika dia maneho ny fitiavany sy ny firaisana ara-nofo amin'ny fanahy roa.
5. Pikantsary afovoany
Ny endrika manintona indrindra izay mandeha mandritra ny fotoana rehetra dia ny moty pao. Nanjary lozabe foana hatramin'izao. Izany no endrika lafika izay midika hoe feminisme.
Ny endrik'io ambony io dia kofehy môtô floral tapakila. Ny loko mainty sy ny loko marevaka dia manjary mahafinaritra tanteraka. Azo ampiasaina ihany koa ho an'ny bridal mehendi.
7. Ny Bridal Mehendi
Mivalomainty lava be ho an'ireo brides-be, nefa mbola mahavariana. Ankoatr'izay, ny tetikasa malaza eo amin'ny brides dia tokony. Drafitra matihanina matihanina ho an'ny olo-malaza. Raiso ity raha efa akaiky ny fampakaram-bady.
Ity paikady tsotra tsy dia tsara loatra ity dia tonga lafatra ho an'ny mpivady gujarati. Ny henna dia manasongadina piozila eo amin'ny tongotra sy ny dihina dandiya eo amin'ny tanana. Fampiratiana tonga lafatra ny kolontsaina sy ny fomban-drazana
9. Royal Motifs
Ny tetikasa dia mampiseho endrika maromaro mamorona izay manome endrika imperial ny mehendi. Ny Elefanta eo an-tampony dia manampy fanampiny amin'ny imperialty.
Ny sary eo afovoan'ny palmie dia mampiseho an'i Radha-Krishna, izay endri-panavotana lehibe indrindra arahin'ny vehivavy iray maneho ny feminisme sy ny pao amin'ny farany.
11. Traditional Designs
Iray amin'ireo endrika tranainy indrindra nentim-paharazana izay efa lamaody nandritra ny taona maro. Izy io dia ahitana printy paisley, fononteny, florals sy curves.
12. Andriamanitra fitiavana
Ny #mehendi tonga lafatra mba hanehoana fitiavana ny havan-tiana amin'ny fanoratana ny anarana sy ny fahadiovan'ny fitiavana amin'ny asa tanana Ganesh eo afovoan'ny palmie.
Drafitra tonga lafatra ho an'ny fampakaram-bady indao-andrefana na ny fampakaram-bady Indiana any amin'ny torapasika. Izy io dia fitambaran-tsarimihetsika maoderina amin'ny tendron'ny fonosana paisley ary ny fampiasana ny vorombola dia manome azy ny endrika nentim-paharazana.
14. Wedding Mehendi
Ny endriky ny fikorontanan'ny mehendi dia tsara indrindra ho an'ny fampakaram-bady nentim-paharazana indianina.
15. Ireo môtô-peo ny ampakarina
Ny mpivady mpanambady miaraka amin'ny paoka zavakanto dia mahatonga azy ho tsara amin'ny fampakaram-bady tokana nentim-paharazana indiana.
16. Sary an'ny Floral Paisley
Firaiketana tsy misy dikany ny zavakanto any amin'ny tandrefana !! Ny florals amin'ny tanana rehetra sy ny lamosina eo amin'ny palmie dia mahatonga azy ho tonga lafatra ho an'ny fampakaram-bady any amin'ny faritra andrefana.
17. Karazan-tsavony ho an'ny curve
Ny henna dia manasongadina indrindra ireo peacock roa amin'ny tànana roa izay voahodidin'ny andohalambo miaraka amin'ny paisley.
18. The Curvy Pattern
Ny famolavolana indrindra dia mampiseho ny karazana karazana samihafa amin'ny clustery kely kely eo amin'ny palmie sy eo an-tanana fa tsy ny rantsantanana.
19. Ny fahadisoan'ny poti-tany
Hatramin'ny palma ka hatramin'ny ampahany sisa dia nasongadina ny sarina saribakoly poti-pambosira voalohany indrindra amin'ny endrika loko marevaka.
20. The Obsession Bracket
Ny sary hosodoko no tena tian'ny mpifankatia mehendi. Ny famolavolana manerana izao dia mifantoka indrindra amin'ny asa fanoratana fonosana.
21. Mixed Pattern
Perfect mehendi mahazatra !! Ny henna dia fitambaran-tsofina rehetra manomboka amin'ny manga, ny ampakarina ary ny mofomamy ho an'ny vorombola ary amin'ny filaminana eo an-tampon'ny rantsana rehetra.
22. The Elephant Pattern
Izany no mehendi indrindra indrindra ny famoronana ny ampakarina rehetra. Ny famolavolana dia endrika miendaka sy manodidin-tsambo izay tsara tarehy eo amin'ny tanana sy ny tongotra.
23. Ny endrika simiamena
Ny endriky ny voaloboka sy ny asa-kanto floral dia asa tsara indrindra amin'ny mehendi miova farany.
24. The Pattern of Paisley
Ny dika pailey dia ny kilasy nentim-paharazana. Ny zavakanto dia azo atao amin'ny endrika isan-karazany toy ny manga-endri-javatra sy ny tsirim-borona hafa.
Tags:henna tattoo mehndi design
tattoos armrip tattoostato ho an'ny vatofantsikaarrow tattootattoos rahavavyscorpion tattootattoo watercolormozika tatoazyTatoazy ara-jeometrikatattoostattoos backtanana tatoazyAnkle Tattoosnamana tattoos tsara indrindradiamondra tattootattoos mahafatifatyfitiavana tatoazytattoo eyeelefanta tatoazytattoos footcat tattooskoi fish tattootratra tatoazytattoo octopusloto voninkazotattoo cherry blossomanjely tattoostattoos voronatattoos mpivadytattoos crosstatoazy voninkazomoon tattoostattooslion tattoosmehndi designtattoo ideaseagle tattoosTattoo Feathermasoandro tatoazytattoos sleeveraozy tatoazytatoazy lolotatoazy ho an'ny zazavavytattoo infinityhenna tattooHeart Tattooscompass tattooNy zodiaka dia mampiseho tatoazytatoazy fokotattoos ho an'ny lehilahy